Coverall Avikelayo Naye ...
Ukuvikelwa kwezokwelapha okulahlwayo ...
Imiyalo Yokusetshenziswa Kwegama Lokuvikelwa Kokuvikela: Imodeli Yokuvikela Eyisembozo / Imodeli Yokucaciswa: I-Cover-One Cover, Imininingwane Yesembozo Esimbili: 160 (S), 165 (M), 170 (L), 175 (XL), 180 (XXL Ukwakheka Kwesakhiwo Lo mkhiqizo unezinhlobo ezimbili: i-one-piece coverall kanye ne-pieceall coverall, equkethe i-hood, okokugqoka namabhulukwe, enekhafula elithambile, iqakala, i-hood kanye nesinqe, futhi ithungwe ngoziphu wokuzikhiya wangaphambili. Umkhiqizo awuyinyumba, uyalahlwa futhi uthungelwe izingoma zefilimu ze-PE ...
Imiyalo yokusetshenziswa kweGown yomkhiqizo weGlasi elahlwayo: Umkhiqizo weGown elahlwayo: I-SUREZEN Model / Imininingwane Modeli: SZ400 Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka, isitayela esiguqukayo. Imininingwane: S, M, L Ukwakheka Kwesakhiwo: Umkhiqizo awunamagciwane, uyalahlwa futhi uthungwe ngefilimu engama-43% ye-SMS (15gms) eyi-57% yendwangu engalukiwe (20gms). 1. Ukubukeka: ukubonakala kwesembozo kuzokoma, kuhlanzeke futhi kungabikho isikhutha. Akukho ukunamathela, ukuqhekeka, imbobo nokunye ukukhubazeka okuvunyelwe ngaphezulu. Ukuthungwa ...
I-Coverall Yokuvikela NgeTape-Sealing Tape
Imiyalo yokusetshenziswa kwe-coverall evikelayo eneteyipu yokufaka uphawu lokushisa Igama lomkhiqizo: I-coverall evikelayo enethephu yokufaka uphawu lokushisa Imodeli / Imininingwane Yokucaciswa: Ingcezu eyodwa ye-Coverall Imininingwane: 165 (M), 170 (L), 175 (XL), 180 (XXL Ukwakheka Kwesakhiwo Lo mkhiqizo isicucu esisodwa, esiqukethe i-hood, ibhulukwe lezingubo, nesembozo sezicathulo ngesigaxa esivulekile, iqakala, isigqoko nesinqe, futhi kuthungwe ngoziphu wokuzikhiya wangaphambili. Ama-seams azovalwa nge-tape yokuvala ukushisa. Umkhiqizo ulahlwa ...
Izembatho ze-Anti Static
Umkhiqizo wethu ufaka ukulingana okuvulekile, okuvulekile esifubeni & emahlombe, ukufakwa okhalweni okunwebeka kwentofontofo ehlukile, & okufihliwe okufihliwe okhalweni nasentanyeni ngokulingana okuphephile. Le ngubo yokulwa ne-static yakhelwe ukusetshenziswa, ukusebenza kahle nokunakekelwa okulula, noma ngabe umsebenzi unamafutha noma omubi kangakanani. I-poly-cotton twill ehlala isikhathi eside kodwa ephefumulayo iphikisana nokubuna, imibimbi namabala. Senza izikibha ezingama-anti-static, amajakethi ama-anti-static, ama-anti-static ebusika ezinye izinto ezisetshenziswa yibhizinisi le-petrochemical ...
Lo mkhiqizo usebenzisa ukuhlunga okuyizitezi ezintathu. Izinqubo zokukhiqiza eziyinhloko zifaka ukuncibilika okushaywayo, i-spunbond, umoya oshisayo noma isibhakela senaliti, njll., Esinomsebenzi wokumelana neziphuzo, izinhlayiya zokuhlunga kanye nama-bacteria. Iziqu eziphelele, imikhiqizo iqinisekisiwe, indwangu yokuhlunga indwangu yokuhlunga emithathu + indwangu yokuvikela indwangu engalukanga iphezulu, umsebenzi nesikole kuyaphuma, qapha njalo, isitayela esikhethekile sasehlobo, ukukhanya nokuphefumula, Kufanela ubuso, akuxegi, ukumelana okuphansi , ayiwubambi umoya, imichilo yendlebe eyisicaba ephezulu, inethezekile ukugqokwa futhi ayiqinisi izindlebe.
Isifihla-buso se-N95 singenye yamaski ayisishiyagalolunye wokuvikela ama-particulate aqinisekiswe yi-NIOSH. "N" kusho ukungazweli kuwoyela. "95" kusho ukuthi lapho kuvezwa inani elithile lezinhlayiya zokuhlola ezikhethekile, ukuminyana kwezinhlayiya ngaphakathi kwesifi kungaphansi kuka-95% kunenhlayiya yezinhlayiya engaphandle kwemaski. Inani lama-95% aliyona isilinganiso, kepha ubuncane. I-N95 akulona igama lomkhiqizo elithile. Uma nje ihlangabezana nezinga le-N95 futhi idlulisa ukubuyekezwa kwe-NIOSH, ingabizwa ngokuthi "imaski ye-N95". Izinga lokuvikelwa le-N95 lisho ukuthi ngaphansi kwezimo zokuhlola ezichazwe kuzinga le-NIOSH, ukusebenza ngokusefa kwezinto zokuhlunga imaski kuzinhlayiya ezingekho oily (njengothuli, inkungu ye-asidi, inkungu yokupenda, ama-microorganisms, njll.) Ifinyelela kuma-95%.
Imaski yokuvikela ezokwelashwa elahlwayo
Imaski yokuvikela yezokwelapha ilungele ukuvikelwa kwabasebenzi bezokwelapha kanye nabasebenzi abahlobene nabo ezifweni ezithathelwanayo zokuphefumula eziphefumula ngomoya. Luhlobo lokuzihlunga okusondele lokuzivikela okokuvikela okunezinga eliphakeme lokuvikelwa, ikakhulukazi elifanele ukuvezwa emoyeni ngesikhathi sokuxilongwa nokwelashwa noma lapho kugqokwa yiziguli ezinezifo zokuphefumula okusakazwa ngamaconsi eduze, leli zinga imaski ingahlunga izinhlayiya emoyeni futhi ivimbe ukungcola njengamaconsi, igazi, uketshezi lomzimba, kanye nezimfihlo. Ukusebenza kokuhlunga kwezinhlayiya ezingekho uwoyela kungafinyelela kuma-95 Ngaphezulu% kufinyelela ezingeni le-N95, okuyithuluzi lokuzivikela elisetshenziswa ngokujwayelekile lezifo ezisemoyeni. Inokulingana okuhle nobuso bomuntu ogqokile futhi ingumkhiqizo wokusetshenziswa kanye. Amaski okuvikela ezokwelapha angavikela izifo eziningi ezinjengebhaktheriya kanye namagciwane. I-WHO incoma ukuthi abasebenzi bezokwelapha basebenzise izifihla-buso zokuzivikela kuma-particulate ukuvikela ukutheleleka ngegciwane emoyeni wesibhedlela.
Lo mkhiqizo usebenzisa isihlungi esinezingqimba ezintathu, esingahlukanisa ngempumelelo izinhlayiya zebhaktheriya ngaphandle kokubamba umoya wakho nokuvimbela ngempumelelo i-haze, impova, nothuli. Iziqu eziphelele, imikhiqizo iqinisekisiwe, indwangu yokuhlunga indwangu yokuhlunga emithathu + indwangu yokuvikela indwangu engalukanga iphezulu, umsebenzi nesikole kuyaphuma, qapha njalo, isitayela esikhethekile sasehlobo, ukukhanya nokuphefumula, Kufanela ubuso, akuxegi, ukumelana okuphansi , ayiwubambi umoya, imichilo yendlebe eyisicaba ephezulu, inethezekile ukugqokwa futhi ayiqinisi izindlebe.
Imiyalo Yokusetshenziswa Kwekhava Yesicathulo Sokulahla Esilahlwayo Igama Elilahlwayo: Imodeli Yekhava Yesicathulo Esilahlwayo / Imodeli Yokucaciswa: Uhlobo Olujwayelekile (Imikhumbi engenawo ithephu yokuvala ukushisa), Uhlobo LweTape-Sealing Type (Seams with tape-sealing tape). Ukwakheka Kwesakhiwo Umkhiqizo awuyona inzalo, uyalahlwa futhi uthungelwe ngendwangu ye-PE film composite non-woven (impahla esemqoka). Ngohlobo lweTape-uphawu lwe-Heat-seal, izingqimba zizovalwa nge-tape evala ukushisa, inamandla amakhulu nokusebenza kwesithiyo. Umkhiqizo P ...